DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Riyaadh – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Riyaadh
09/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaaladda Riyaadh ee dalka boqortooyada dalka Sucuudiga, kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay madaxda dalka Sacuudiga.
Wafdiga Ra’iisul wsaaraha ayaa waxaa soo dhoweeyay mas’uuliyiin sar-sare oo ka tirsan boqortooyada, iyada oo booqasho laba maalmood ah ay halkaas uga billaabaneyso.
Ra’iisul wasaaraha ayaa kulamo la yeelan doono mas’uuliyiinta ugu sar sareysa dowladda boqortooyada Sucuudi Carabiya, si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo aminga.
Xassan Cali Kheyre ayaa sidoo kale kulamo la qaadanaya madaxda Bangiga Horumarinta Islaamka oo ay ka wada hadlayaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya, maal-gelinta iyo dib-u-habaynta ballaaran ee lagu sameeyay hannaanka maamulka maaliyadda dalka.
Dowladda Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka taageera Soomaaliya iyadoo safarkan ra’iisul wasaaraha uu maanta ku tagay Riyaadh uu ahaa mid aan horey loo sii shaacin.
SAWIRO:- Guddoomiyaha golaha shacabka oo kulan la qaatay danjiraha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya